ယောဟန်အောင်: Pantip (ပဲန်တစ်ပ်ကုန်တိုက်) လိုဆို
Pantip (ပဲန်တစ်ပ်ကုန်တိုက်) လိုဆို
Pantip ကုန်တိုက်က ဘန်ကောက်မြို့က ကွန်ပြူတာပစ္စည်းတွေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲယားတွေ ရောင်းတဲ့ ကုန်တိုက်တခုပါ။ သူက ဘန်ကောက်က ကြိုက်တဲ့ ကုန်တိုက်တွေ၊ နေရာတွေကိုတော့ သွားပါ။ ပန်တစ်ကိုတော့ မသွားချင်ဘူးလို့ လိုဆိုက ဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့အသည်းကိုခွဲသွားတဲ့ ကောင်မလေးက အဲသည်မှာ ဆိုင်ဖွင့်ထားလို့ပါတဲ့။ သီချင်း စာသားကတော့ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ မရှိလှပါဘူး။ တဲ့တိုးကြီးပါ။
ဆင်ပေါက်ကတော့ ဒီသီချင်းအသွားကို "လူနုံကြီး" ဆိုပြီး ပြန်ဆိုထားပါတယ်။
ငါ မင်းကို ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ ခေါ်ပါရစေ၊ ငါ မင်းကို တခုခုကျွေးဖို့ ဖိတ်ပါရစေ။
ငါ မင်းကို အလုပ်တွေ မအားသေးလို့ ပြောမပြီးနိုင်သေးတဲ့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ဆက်ပြောပါရစေ
ငါ မင်းကို အပြင်ခေါ်သွားဖို့လည်း အချိန်သိပ်များများ မရှိပါဘူး
ငါ မင်းကို The Mall ကုန်တိုက် ခေါ်သွားပါရစေ။ ပြီးတော့ Central ကို တို့သွားကြတာပေါ့
ပြီးတော့ တို့နှစ်ယောက်တည်း Emporium ရုပ်ရှင်ရုံကို သွားကြတာပေါ့
ဒါပေမယ့် ငါ Pantip ကုန်တိုက်ကို မသွားချင်ဘူး။ ငါ Pantip ကုန်တိုက်ကို လုံးဝ မသွားဘူး။
ငါ မင်းကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ Pantip ကိုတော့ မသွားပါနဲ့။ အရင်ကလည်း ပြောပြီးသားပါ။
ငါ အဲသည်တယောက်နဲ့ မတွေ့ချင်ဘူး။ Pantip မှာ ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ ငါ့အသည်းခွဲခဲ့သူ တယောက်နဲ့တော့ မတွေ့ချင်ဘူး။
World Trade Center လည်း ကောင်းပါတယ်။ (MK Suki) သွားစားလည်း ရပါတယ်။
ပြီးတော့ MBK ကို သွားရင်သွား၊ သို့မဟုတ် Siam Square သွားတာပေါ့
လေအေးပေးထားတဲ့ အခန်းထဲ၊ နီးနီးကပ်ကပ် ထိုင်စကားပြောကြတာပေါ့
အလုပ်ကနေ မည်းမှောင်လာတဲ့ မျက်နှာနဲ့
သူ့ မျက်နှာနီလာတဲ့အထိ (ပြောမှာပေါ့)
................ ..................... ..........................
gor wa ja chuan ter bai doo nung lae wa ja chuan ter bai gin kao
I'll invite you to go and watchamovie, invite you to go and haveameal
yaak ja koo-ee rueang kong song rao rueang gao gao tee yung kaang ka
I want us to talk about an old story which is not yet finished
ก็เพราะว่าฉันในช่วงนี้ งานมันยุ่ง มันยุ่งเป็นบ้า
gor prow wa chun nai chuang nee ngan mun yoong mun yoong ben ba
ler-ee mai koi mee way lam way-la ja pa ter ork bai tee-o ler-ee
I don't really have much time to take you out to places
ler-ee wa ja pa ter bai der mol laow bai dtor gun tee cen-trun
I will take you to The Mall, and we'll go to Central afterwards
bai em-po-riam gor bai gun kae me ter gup chun gor por
We'll go to Emporium too, just the two of us
dtae mai bai pun-tip dtae mai bai punt-tip nae norn
But I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip
ya bai ler-ee na kor worn krow gorn gor ker-ee poot koo-ee
I beg you not to go to Pantip, last time I've talked to you before.
wa ja mai bai pan-tip ja mai bai pun-tip nae ler-ee
mai yaak jer kon tee ker-ee ker-ee huk ok gun bert raan yoo tee pun-tip
I don't want to meet someone, someone who broke my heart and now open the shop at Pantip
werl-traed gor do dee em-kae soo-gee gor chai dai
The World Trade Center looks good, MK Suki is OK, too.
bai ma-boon-krong dtor ben ngai reu wa ja bai sa-yam sa-kwae
We could go to Mah Boon Krong next, or to Siam Square
nung dtaak air gun hai choom bort laow pram plot gun hai choom cham
We’ll sit in the air-condition place comfortably, and talk intimately.
jaak tee tam ngan jon na dum
From the office till my face turn black
ja per-ee nam kam hai ter na daeng
I’ll tell the words that make you blush
I will take you to The Mall, and then we'll go to Central afterwards
That I'm not going to Pantip, there's no way I'm going to Pantip
mai yaak jer kon tee ker-ee ker-ee huk ok gun bert raanyoo tee pun-tip
wa ja mai bai pan-tip wa ja mai bai pun-tip nae ler-ee
ja mai bai pun-tip nae norn
there's no way I'm going to Pantip
I beg you not to go to Pantip, last time I've talked to you before
wa ja mai bai pun-tip wa ja mai bai pun-tip nae ler-ee
I don't want to meet someone, someone who broke my heart and now open the shop at Pantip.
Posted by Yaw Han Aung at 5:58 AM